Mohamud Aden Samatar: Dastuurka Cusub Ee Somalia Oo Fududeeyay Kala Tagga Jamhuuriyadda Somaliland Iyo Somalia | Awdalmedia.com
Mohamud Aden Samatar: Dastuurka Cusub Ee Somalia Oo Fududeeyay Kala Tagga Jamhuuriyadda Somaliland Iyo Somalia
Sat 09 September 2017.
Intii aanay dhicin dawladdii Somalia ee uu madaxwaynaha u ahaa kali taliyihii Siyaad Barre iyo dawladihii ka horeeyayba, xuduudaha Somalia way furnaayeen, oo kumay cayinayn dastuurka sababta oo ah waxa lagu xisaabtamayay , sadexdii Somali ee maqnaa, sida Jabuuti, NFD iyo Somali-Galbeed.
Markii ay midoobeen ( Israaceen ) labadii dal ee Somaliyeed, JSL iyo Somalia, kadib markii ay madaxbanaanidoodi ka heleen Ingriskii iyo Talyaanigii ayaa sababta ay u midoobeen ( isuraaceen ) ay ahayd in ay sii wadaan halganka lagu xoraynayo sedexii Somaliyeed ee maqnayd, tageeraana siiyaan dhaqdhaqaaq kasta oo u halgamaya soo celinta dhulkii ( dalalkii ) Somaliyeed ee maqnaa. Taas oo ahayd sababtii ugu waynayd ee midawgga ( Israaca ) JSL Iyo Somalia.
Astaanta calankii Somalia ee Buluuglay ee ay ku xardhan tahay xidigta shan geesoodka lihi, waxay astaan u ahayd shantii Somaliyeed, labadii xoroobay, JSL iyo Somali, iyo sedexdii maqnaa Jabuuti, NFD iyo Somali-Galbeed. Dawlad kasta oo dhalataana waxa ay kaga doodaysay masraxyada siyaasadda sidii uu adduunku ugu tageeri lahaa soo celinta sedexdii maqnayd, oo aan gabasho ku jirin.
Taas oo keentay in uu dhaco dagaalkii dhex maray Somali Republic iyo Ethiopia 1977, inkasta oo shaki ku jiro, in daacad laga ahaa dagaalkaa. Iyada oo ay geesiyaal badani naftoodii ugu hureen si dacaadnimo ku jirto. Dagaalkuna uu dhacay mar ay kali talisnimo iyo cadaalad darro ka jirtay Somalia.
Jinsiyadda ama muwaadaninimadu way u furnayd qofkasta oo Somali ah, in uu noqdo muwaadin Somalia u dhashay ama helo jinsiyadda Somalia, meeshu doono ha ku dhashee, Siiba hadduu ku dhashay meel ka mida sedexdii maqnayd, sida Jabuuti, Jigjigga ama Gaarisa.
Dastuurka cusub ee Somalia waxa uu u qeexayaa xuduudaha Somalia, in jabuuti ka xigto Waqooyi, Galbeedka ka xigto Ethiopia, oo aanay ku jirin Somali-Galbeed, Koonfurna ka xigto Kenya oo aanay ku jirin NFD.
Markaa waxa meesha ka cad in jinsiyadda ama muwaadaninimada qofka Somaliyeed in ay ku salaysnaan doonto, qofka ku dhashay meel ka mid ah inta ay xuduudda Somalia ka kooban tahay.
Hadaba arintan ama dib u qeexidda xuduudda iyo jinsiyadda Somalia ee Dastuurka cusub ee Somalia ee uu salka u yahay Federal ku salaysan Dawlad Beeleedyo, ayaa waxa ay soo afjaraysaa isku-milankii J Somaliland iyo Somalia. Taas oo anay meesha oolin in ay Somalia ku darsato JSL xuduudkeeda sida uu Dastuurka cusub ee Somalia dhigayo. Xuduudda Somaliyana u qeexnaato ka xigto Waqooyi Somaliland, Koonfur Kenya iyo Galbeed oo ah Ethiopia, maxaa yeelay Somaliland iyo Somalia u may midoobin hab beeleed, inkasta oo loo qaybiyay beelo, Dir iyo Harti, markii ay madaxbanaanidoodii geeyeen Somalia.
Dib u qeexiddan xuduudda Somalia iyo Jinsiyadda qofka Somalia ah ayaa waxa kale oo ay keenyasaa in la badalo calankii Bluuglay ee astaanta u ahaa shanta Somaliyeed dhexdana ay kaga xardhanayd xidigtii shan geesood. Mar hadii sedxdii maqnaa laga maarmay, Somaliland-na ay ku hungooday la midawgii ( israacii ) Somalia, Somaliweyn arinteediina ay noqotay in Somali waliba meeshiisu ku filnaatay oo uu ku yahay mabsuud/raali. Haddii ay ahaato Jabuuti, Kililka shanaad ama NFD.
Taas oo iyaduna keenaysa in ay taal, in JSL ay meesheedaa mabsuud/raali ku tahay, kadib markii ay go'aansadeen shicibwayanha JSL in ay madaxbannaanidoodii ama xornimadoodii la soo noqdeen May 18, 1991. Meeshana ka saaraysa is-dhexyaacii iyo Somaliya oo mar kale sheegata J Somaliland.